နေအိမ် / Aceris ဥပဒေ SARL / 2015 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်စစ်တမ်း
အဆိုပါ "2015 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်စစ်တမ်း: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အတွင်းတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု", အဖြူရောင်အားဖြင့်&ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်တက္ကသိုလ်ဘုရင်မကြီးမာရိကိုနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိကာယကံရှင်များ၏နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေး, သူတို့ရဲ့ရိပ်မိထိရောက်မှုသုံးသပ်ပြီးနှင့်ရွေးချယ်ထားသည့်အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ရှင်သန်နိုင်စွမ်းစမ်းသပ်, ၏အခြေခံပေါ်မှာ 763 မေးခွန်းလွှာတုံ့ပြန်မှုများနှင့် 105 ကောက်ယူအင်တာဗျူးများ.
အဆိုပါအညီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိမှအဓိကအားနည်းချက် 2015 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိစစ်တမ်းက၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်ရှုမြင်နေသည်, အရာထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကွန်ရက်များ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ရှေ့နေချုပ်က Network ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြ, ဒါပေမယ့်ရေးဆွဲခဲ့ကြကြောင်းအချို့နဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောက်ချက်လည်းရှိပါတယ်.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်စစ်တမ်း 2015: Play ကို၏ပြည်နယ်
90% ဖြေဆိုသူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းယန္တရားကြောင်းကိုညွှန်ပြနှင့်နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိ၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးဝိသေသလက္ခဏာများဆု၏ဘက်တော်သားတွေဟာ, တိကျတဲ့ဥပဒေရေးရာစနစ်များနှင့်အမျိုးသားရေးတရားရုံးများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေ, အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ခုံသမာဓိလူကြီးရွေးရန် option ကို. စိတ်ဝင်စားစရာ, ထဲမှာအိမျအကွံဉာဏျအဖွဲ့ခွဲအထူးသဖြင့်လျှို့ဝှက်နှင့် privacy နှာ.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိ၏အဆိုးဆုံးဝိသေသလက္ခဏာများသည်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်များမှာ, အဆိုပါခုံသမာဓိလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းထိရောက်သောအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများမရှိခြင်း, အဆိုပါခုံသမာဓိလူကြီး '' ထိရောက်မှုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုမရှိခြင်းနှင့်မြန်နှုန်း၏မရှိခြင်း. ဤအသွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏ဘုံပိုင်းခြေသူတို့က၎င်း၏ကာယကံရှင်များကလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အတွက်ခုံသမာဓိလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြည်တွင်းရေးပြုပြင်ခြင်းဆက်စပ်ကြောင်း.
ဖြေဆိုသူတစ်ဦးကသိသိသာသာအများစုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးခုံသမာဓိအတွက်ခုံသမာဓိဆုများအတွက်တန်ရာတခုတခုအပေါ်မှာအယူခံယန္တရားရှိမဖြစ်သင့်ကြောင်းဖော်ပြထား (77%) နှင့်တစ်ဦးပိုမိုသေးငယ်အများစု (61%) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်ခုံသမာဓိထိုသို့သောယန္တရား၏ပါဝင်မှု disfavored.
တစ်ဦးအယူခံယန္တရားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးခုံသမာဓိဖွဲ့စည်းပုံမှာရပါမည်, 52% ဖြေဆိုသူကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိ၏ system ကိုအတွင်းထက်ပြင်ပဖိုရမ်ကနေတဆင့်အကောင်အထည်ဖော်သင့်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့, 26% အဆိုပါအယူခံခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်အခြားခုံသမာဓိခုံရုံးသတ်မှတ်နှင့်အခြားမယ်လို့ 26% သက်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိအဖွဲ့အစည်းများကကိုင်တွယ်ခံရအယူခံမျက်နှာသာ. တစ်ဦးအယူခံယန္တရားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်ခုံသမာဓိဖွဲ့စည်းပုံမှာရပါမည်, 51% ဖြေဆိုသူတစ်ဦးကနိုင်ငံတကာတရားရုံးကပြင်ပအယူခံကြီးကြပ်မှုပိုနှစ်သက်မယ်လို့.
ယေဘုယျအား, ဖြေဆိုသူကဖန်ဆင်းအချို့သောတိုးတက်မှုများရှိလိမ့်မည်ဟုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိ၏အကျိုးကျေးဇူးများင်း၏အပြစ်အနာအဆာပေမယ့်အသုံးပြုသူများသည်ထင်ရှားသောကွောငျးတှေ့အားထငျရှား, အထူးသဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့် arbitrating ၏အမြန်နှုန်းစပ်လျဉ်း. အခွားသောမှတ်သားလောက်သောအကြံပြုချက်များကိုခုံသမာဓိဆု၏ Non-ဘက်တော်သားများအတွက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံကျဉ်းမြောင်းဖို့နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်းပြင်ဆင်ရေးပါဝင်သည်, အရေအတွက်အဖြစ်တိုင်းရင်းသားနှင့်ကျား, မမတူကွဲပြားမှုအတွက်ခုံသမာဓိလူကြီးများရေကူးကန်ကိုတိုးချဲ့, ခုံသမာဓိလူကြီးပေါ်နှင့်တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများ. ဖြေဆိုသူကိုလည်းခုံသမာဓိဆုအပြည့်အဝက၎င်း၏အမှုကိုတင်ပြရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ဘဲပါတီများ၏အခြေခံပေါ်မှာစိန်ခေါ်ခံနေရကိုကြောက်ရွံ့အချို့သောအခြေအနေများတွင်ပြတ်ပြတ်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်ခုံရုံး '' တွန့်ဆုတ်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ shared ပါပြီ. ဤ "တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာလီယံ" ကိုမကြာခဏထပ်တလဲလဲတိုးချဲ့ထားကြောင်းနှင့်လတ်ဆတ်သောသက်သေအထောက်အထားနှောင်းပိုင်းတွင်အလှည့်များတွင်မြန်နှုန်းမရှိခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုတိုးလာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဝန်ခံခံရသတ်မှတ်ရက်ဦးဆောင်.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်စစ်တမ်း 2015: ထိုင်ခုံနှင့် Institution များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
ထိုကဲ့သို့သောထိုင်ခုံ၏ပြည်တွင်းတရားရုံးများ၏ကြီးကြပ်ရေးမှူးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏အဆင့်နှင့်သဘာဝအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ခုံသမာဓိသက်ရောက်မှုခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုများ၏ထိုင်ခုံများ၏ရွေးချယ်မှု. ဖြေဆိုသူသူတို့ရဲ့အများဆုံးနှစ်သက်သောနှင့်အသုံးများထိုင်ခုံလန်ဒန်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထား, ပဲရစ်, ဟောင်ကောင်, စင်္ကာပူနှင့်ဂျီနီဗာ. သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးဂုဏ်သတင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုထိုင်ခုံ၏ဒါပေမယ့်လည်းတရားဝင်စနစ်၏ကြားနေရေးနှင့်ဘက်မလိုက်မှုမောင်းနှင်နေကြသည်, အမျိုးသားခုံသမာဓိဥပဒေနှင့်အတွေးဆုံးဖြတ်မှသဘောတူညီချက်များအားပြဋ္ဌာန်းဘို့စံချိန်နှင့်ခုံသမာဓိဆု.
ထိုကဲ့သို့သောခုံသမာဓိအဖွဲ့အစည်းများ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကျွမ်းသို့မဟုတ်တည်နေရာအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင်ပြေ၏အကြောင်းရင်းများသိသိသာသာနိမ့်အဆင့်အနေဖြင့်အချို့သောထိုင်ခုံများအတွက် preference မကြာခဏအခ်ါဥပဒေရေးရာ features တွေအပေါ်အခြေခံသည်. တစ်ဦးထိုင်ခုံရဲ့တရားဝင်ဥပဒေရေးရာအခြေခံအဆောက်အဦအရည်အသွေးမတယောတံခါးခုံကိုရောက်ရှိပြီးနောက်အဆင်ပြေ၏အကြောင်းရင်းများသို့သော်ကာယကံရှင်များပိုမိုအရေးကြီးသောဖြစ်လာဟန်.
စိတ်ဝင်စားစရာ, ဖြေဆိုသူအတိတ်ကျော်အများဆုံးတိုးတက်လာသောခုံသမာဓိထိုင်ခုံများနှင့်အများဆုံးတိုးတက်လာသောခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးကြောင်းရှုမြင်5ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏စင်္ကာပူနှင့်အသံဆူဆူညံညံဟောင်ကောင်, နှင့် HKIAC နှင့် SIAC. တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ထိုင်ခုံတိုးတက်မူကြောင်းကိုဖော်ပြမှဖြေဆိုသူဦးဆောင် elements ပိုကောင်းကြားနာအဆောက်အဦများပါဝင်သည်, ထိုင်ခုံနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသောအရည်အသွေးကိုခုံသမာဓိလူကြီးများရရှိနိုင်မှု, အမျိုးသားခုံသမာဓိတရားပိုကောင်းဒေသခံခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့တိုးတကျမှုမြား.
ခုံသမာဓိအဖွဲ့အစည်းများ၏ရွေးချယ်မှုဟာခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့်မကြာခဏထိုကဲ့သို့သော၏ချိန်းအဖြစ်အဆုံးအဖြတ်ကိစ္စများများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်, နှင့်စိန်ခေါ်မှုများရန်, ခုံသမာဓိလူကြီး. 79% အတိတ်ကာလကိုကျော်ဖြေဆိုသူ '' ခုံသမာဓိ၏5နှစ်ပေါင်းအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်.
ဆုံးခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြား ICC ကိုဖြစ်ကြသည် (68%), LCIA (37%), HKIAC (28%), SIAC (21%) နှင့် SCC (13%), နှင့်ဖြေဆိုသူ '' ဦးစားပေး၎င်းတို့၏အုပ်ချုပ်ရေး၏အရည်အသွေးတစ်ခုအကဲဖြတ်အပေါ်အခြေခံထားတယ် (တက်ကြွသောအပါအဝင်, အဆောက်အ, ဝန်ထမ်း၏အရည်အသွေးကို), "နိုင်ငံတကာက" နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှိနေခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခုံသမာဓိစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းသူတို့ရဲ့အဆင့်ကို. အဆိုပါခုံသမာဓိအပိုဒ်ညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာနှစ်ဦးစလုံးပါတီများနှငျ့ညီညှတျဖြစ်ခြင်းတစ်ဦးကအကြံပြုအဖွဲ့အစည်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ထိပ်နှစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ဂုဏ်သတင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုများမှာ (62%), အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း၏ယခင်အတွေ့အကြုံ (52%) နှင့်ထိုင်ခုံပုခုံသမာဓိဘို့ရွေးကောက် (36%). ဒါကနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်အချို့အဖွဲ့အစည်းများပေးထားသောထိုင်ခုံမှ၎င်းတို့၏ရိပ်မိ connection ကိုမှအကျိုးနှင့်တစ်ဦးထိုင်ခုံများ၏အရည်အသွေးတစ်ဒေသအလိုက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၏လူကြိုက်များအပေါ်တစ်ဦးခိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါစေခြင်းငှါအကြံပြု. အဆိုပါခုံသမာဓိလူကြီးအဆိုပါဆု၏စိစစ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကယောဂီသူတို့အခြားကျော်တစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းကြိုက်တတ်တဲ့အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ဖော်ပြထားခြင်းနေစဉ် In-အိမ်သူအိမ်သားအကွံဉာဏျအဖွဲ့ခွဲအထူးသဖြင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအချို့အမျိုးအစားများအတွက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှာ.
ဖြေဆိုသူခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားကသူတို့ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ပျမ်းမျှအလျားနှင့်အဆုထုတ်ပေးမှတစ်ဦးချင်းစီခုံသမာဓိလူကြီးများကခေါ်ဆောင်သွားအခြိနျသက်ဆိုင်သောဒေတာထုတ်ဝြေခင်းအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိ၏တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ခံစားရပါတယ်, နှင့်များ၏ချိန်းအပေါ်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်င့်လင်းမြင်သာတိုးမြှင့်, နှင့်စိန်ခေါ်မှုများရန်, ခုံသမာဓိလူကြီး. အဖွဲ့အစည်းများတစ်ဦးတို့ကိုပြုပြင်ကောင်းပြုပြင် form မှာဆုထုတ်ဝေရန်သင့်ကြောင်းအကြံပြုချက်တစ်ဦးအမှုငြင်းခုံသောအခါ၎င်း၏ပညာရေးတန်ဖိုးနှင့်အသုံးဝင်မှုနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်မျက်နှာသာဒါပေမယ့်လည်းခုံသမာဓိရုံးစွမ်းဆောင်ရည်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့နဲ့အရည်အသွေးမြင့်ဆုရေးသားဖို့ခုံသမာဓိလူကြီးအားပေးမယ့်နည်းလမ်းအဖြစ်ခဲ့သည်. က meritorious စိန်ခေါ်မှုများကိုတည်ထောင်စေခြင်းငှါအရာပေါ်ခွအေနမြေားသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လျှောက်လွှာစနစ်တကျထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့လည်းတစ်ဖွဲ့လုံးကခုံသမာဓိအသိုင်းအဝိုင်းအကျိုးရှိမည်ဟုသင်သိရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအစပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှီးနှောအရည်အချင်းမပြည့်မှီဆုံးဖြတ်ချက်များပါတီများတရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ပေးလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားခဲ့သည်.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်စစ်တမ်း 2015: အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ
အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့တီထွင်မှုများပါဝင်သည်, ဥပမာ, မှကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ရပ်တည်ချက်များကိုထင်ဟပ်ကာနောက်ဆုံးဆုပေးအပ်ခြင်းများအတွက်အချိန်ဇယား၏ပါတီများကိုအကြောင်းကြား tribunals သောလိုအပ်ချက်, အချိန်မီဖက်ရှင်အတွက်ဆုဆပ်ဖို့ခုံသမာဓိလူကြီး incentivize နှင့်ဆုချီးမြှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏အရှည်နှင့်မသေချာမရေရာနှင့်အတူ client များ '' မကျေနပ်မှုအချို့သက်သာစေနိုင်ကြောင်းရန်မျှော်လင့်သော.
92% ဖြေဆိုသူရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသေးငယ်တောင်းဆိုမှုများအတှကျအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတွင်ထည့်သွင်းစေလိုခြင်းနှင့် 94% အငြင်းပွားမှုများကို USD ကျော်လွန်ကြောင်းယုံကြည် 1 သန်းသည်ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ပြင်ပကရြောကျသငျ့သညျ.
ဖြေဆိုသူတဝက်နီးပါး (46%) ခုံရုံး၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမတိုင်မီအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလိုအပ်နေသက်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းတရားရုံးများဖို့ဦးစားပေးပြန်လည်ကုလျှင် 29% ပိုမိုနှစ်သက်အရေးပေါ်ခုံသမာဓိလူကြီး. အများဆုံးဖော်ပြထားစိုးရိမ်ပူပန် (79%) ပြန်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်၏ဘက်တော်သားမှပြောပြတယ်. ဖြေဆိုသူအများစုဟာ (93%) မည်သို့ပင်ဆိုစေအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအရေးပေါ်ခုံသမာဓိရုံးအပေါ်ပြဌာန်းချက်များထည့်သွင်းမျက်နှာသာ.
အနုညာတစီရင်တိုင်ပင်နည်းလမ်းများစွာနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိတိုးတက်အောင်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်, အထူးသဖြင့်အတွင်းကိစ္စများကျဉ်းမြောင်းခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်မှဆန့်ကျင်ဆုံးမစကားကိုအတူလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်, အားတက်စရာအခြေချ, တစ်ခုံသမာဓိစဉ်နှင့် overlawyering မစေ့စပ်ဖြန်ဖြေ၏အသုံးပြုမှုအပါအဝင် (e.g. ကိစ္စရပ်များများ၏အပြုအမူအတွက်အရင်းအမြစ်များအချိုးအစားမညီမျှမှုကိုအသုံးပြုခြင်းမပါဝင်). တိုင်ပင်ခြင်းကိုလည်းအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်နည်းပညာပိုကောင်းအသုံးပြုမှုကိုလုပ်နိုင်ကြောင်းနှင့် 44% တိုင်ပင်အီလက်ထရောနစ်စက္ကူဖိုင်တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီအားပေးသင့်ကြောင်းစဉ်းစား.
ခုံသမာဓိများနှင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေဆက်စပ်နေသောနေရာများတွင်အသုံးပြုကြသည်လိုက်တဲ့အခါ, လုပ်ငန်းစဉ်များအကြားတစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာထပ်ပိုမိုနှစ်သက်သည် 78% ဖျန်ဖြေခြင်းကြိုးစားခဲ့နိုင်နိုင်အောင်တစ်ခုံသမာဓိတည်းခို၏စိတ်ကူးပိုမိုနှစ်သက်, စိတ်စွန်းကွက်ခြင်းမရှိဘဲခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုမှ. စိတ်ဝင်စားစရာ, သာ 45% ဖြေဆိုသူပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်သဘောတူညီချက်များပြဋ္ဌာန်းရန်ဖို့စည်းဝေးကြီးကပိုမကြာခဏပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်သူတို့ကိုအားပေးလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်. 54% တစ်ဖျန်ဖြေရာမှရရှိလာတဲ့အခြေချသဘောတူညီချက်များ၏ဘက်တော်သားအပေါ်စည်းဝေးကြီးကပိုမကြာခဏစေ့စပ်ဖြန်ဖြေသုံးစွဲဖို့သူတို့ကိုအားပေးလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထား; အချို့သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းအဆိုပြုထားစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကို "ဖြေရှင်းချက်ပြဿနာတစ်ခုရှာနေ" မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်စစ်တမ်း 2015: soft ဥပဒေနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ
ပျော့ပျောင်းသောဥပဒေနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များများအသုံးပြုမှုနှင့်ထိရောက်မှုအဆိုပါခုံသမာဓိအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအငြင်းပွားဖွယ်ခေါင်းစဉ်ခဲ့. အဆိုပါခုံသမာဓိလုပ်ငန်းစဉ်ရိုသေလေးစားမှုသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်သရုပ်ဆောင်များကိုနှင့်အချို့သောကာယကံရှင်များ၏အပြုအမူနှင့်အတူ "အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်" addressing တူရိယာ Self-မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်ဟန့်တားလွတ်လပ်တဲ့စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဒီတူရိယာဝေဖန်ကြအမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပါပြီ, နှင့်နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိလည်း "overregulated" ခံရသည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်.
ယေဘုယျအား, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်စစ်တမ်းအရသိရသည် 2015, ဖြေဆိုသူလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အပျော့ဥပဒတူရိယာတစ်ခုအပြုသဘောအမြင်ခဲ့. 50% ဖြေဆိုသူသူတို့အဘယ်သူအားမျှသို့မဟုတ်အများကြီးမဟုတ်တည်ရှိဘယ်မှာလမ်းညွှန်မှုပေးကြောင်းယုံကြည်သည် 48% သူတို့တည်ဆဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ဥပဒေတွေဖြည့်စွက်ယုံကြည်.
တစ်ဦးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအများစု (70%) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိလက်ရှိစည်းမျဉ်းတစ်ခုလုံလောက်သောငွေပမာဏကိုအတော်ပင်သောမြင်ကွင်းကိုဖော်ပြခဲ့ကြသည်နှင့် 17% ဖြေဆိုသူအလွန်အကျွံစည်းမျဉ်းခုံသမာဓိရှိကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား; အခြို့သောကြောင့်စည်းမျဉ်းအဆိုပါခုံသမာဓိလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များသက်ဆိုင်သူများအားဖြင့်လွတ်လပ်သောအတွေး stifle ခံစားရတယ်, နှင့်အခြားသူများကိုသူတို့ "ခက်" စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း rigidly လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အပျော့ဥပဒေများလျှောက်ထားရန်ခုံရုံးဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြ. ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကို၏မျက်နှာသာအတွက်ကြည်လင်သောအများစုပေးထား, ဒါကြောင့်စည်းမျဉ်းများလက်ရှိအဆင့်ကိုလျော့မည်အကြောင်းဖွယ်ရှိပုံရသည်.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အတွက်အထောက်အထားများ၏ယူပေါ်တွင် IBA စည်းကမ်းများ 2010 (77%) နှင့်အကျိုးစီးပွား၏ပဋိပက္ခအပေါ် IBA လမ်းညွှန်ချက်များ 2004 နှင့် 2014 (71%) ဝေးနေဖြင့်အများဆုံးကျယ်ပြန့်လူသိများနှင့်အများဆုံးမကြာခဏဖြေဆိုသူများကတူရိယာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်, နှင့်အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှု ratings ချီးမြှင့်ခဲ့ကြ, 69% နှင့် 60% လိုအပ်သလို. ဖြေဆိုသူမှတင်ပြခဲ့သည်အခြားတူရိယာ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အတွက်ပါတီကိုယ်စားပြုအပေါ် IBA လမ်းညွှန်ချက်များ (2013), ကျင်းပရေးအနုညာတတရားစွဲဆိုထားအပေါ် UNCITRAL မှတ်စုများ (1996)နှင့်အနုညာတစီရင်၏ထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုမှခုနှစ်တွင်-House ရဲ့လမ်းညွှန် ICC ကို (2014) အများဆုံးမကြာခဏထိရောက်သောကြားနေသို့မဟုတ်မစဉ်းစားနှင့်ဖြေဆိုသူအလေ့အကျင့်၌မိမိတို့သုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူလျော့နည်းအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်းဖော်ပြထားခဲ့သည်.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်စစ်တမ်း 2015: အတိအကျမင်းသားများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်စည်းမျဉ်းဥပဒေ
တစ်ဦးကအသေးအများစု (55%) ဖြေဆိုသူခုံသမာဓိလူကြီးများ၏အပြုအမူကိုပိုမိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သင့်ကြောင်းယုံကြည်သည် (33% ခုံသမာဓိလူကြီးများနှင့် 62% သဘောတူညီခဲ့ပုဂ္ဂလိကယောဂီ၏) ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အများစုကမျက်နှာသာပေးခဲ့ပါသည် (22% ခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားကထုတ်ပေးတူရိယာများအတွက်အနည်းငယ် preference ကိုပြသ, 23% ထိုကဲ့သို့သောခုံသမာဓိ၏ Chartered ဘဏ်ဟာ Institution မှအဖြစ်ခုံသမာဓိလူကြီးတစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကငျြ့နေတဲ့ကုဒ်ကတဆင့်နှင့် 21% အတိတ်ကိစ္စများတွင်တစ်ခုခုံသမာဓိရုံးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပါတီများပေး databases ကိုတစျဆငျ့).
ပြဿနာပဋိပက္ခများအားဖြင့်စီးပွားဖြစ်ခုံသမာဓိအတွက်တိကျတဲ့စည်းမျဉ်းလိုအပ်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်မဟုတ် 63% ဖြေဆိုသူနှင့်နေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်ခုံသမာဓိအတွက် 51% ဖြေဆိုသူ. ထပ်ခါတလဲလဲချိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးခုံသမာဓိနှစ်မျိုးလုံး၏အခြေအနေတွင်အဆုံးအဖြတ်အများစုအားဖြင့်ပိုပြီးပြဿနာစဉ်းစားပေမယ့်ဖြေဆိုသူယေဘုယျအားဖြင့်လက်ရှိတူရိယာဟုခံစားရနေကြတယ် (e.g. အကျိုးစီးပွား၏ပဋိပက္ခအပေါ် IBA လမ်းညွှန်ချက်များ) ထိုကိစ္စနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်သောလမ်းညွှန်မှုပူဇော်. စိတ်ဝင်စားစရာ, ဖြေဆိုသူစီးပွားဖြစ်ခုံသမာဓိထက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်ခုံသမာဓိအတွက်အလားအလာရှိသောပဋိပက္ခများပိုမိုအလေးချိန်ပူးတွဲဟန်, ဖြစ်ကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်ခုံသမာဓိစပ်လျဉ်းအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအချက်၏.
ရုံဖြေဆိုသူထက်ဝက်အောက်မှာ (46%) ပါတီကိုယ်စားလှယ်များ၏အကငျြ့ကိုပိုမိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့်ဖြေဆိုသူအများဆုံးမကြာခဏပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပိတ်ဆို့မှုခုံရုံး '' ထိရောက်သောအသုံးပြုမှုမှတဆင့်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသင့်ကြောင်းခံစားရ.
ပိုပြီးစည်းမျဉ်းအရပျ၌ခံရမည်ကြီးဘူးဆိုရင်, လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်စရာအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမှတဆင့်ရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောဖို့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် 2014 LCIA စည်းကမ်းများ (35%) နှင့်လမ်းညွှန်ချက်များမှတဆင့်, ထိုကဲ့သို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အတွက်ပါတီကိုယ်စားပြုအပေါ် IBA လမ်းညွှန်ချက်များအဖြစ် (27%).
ခုံရုံးအတွင်းရေးမှူးများအသုံးပြုမှုကိုနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိအတွက်ဘုံဖြစ်ပါသည်; တစ်ဦးလွှမ်းမိုးသောအများစု (97%) ဖြေဆိုသူရဲ့ function ကိုသတိပြုမိကြသည်နှင့် 82% တိုက်ရိုက်ခုံရုံးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြ. ယေဘုယျအား, ဖြေဆိုသူခုံရုံးအတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးအပြုသဘောအမြင်ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုများ၏ထိရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်အလားအလာရှိသောခုံသမာဓိလူကြီးရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းတင်ဆက်ယုံကြည်. သာ 9% သူတို့အသုံးမဝင်ခဲ့ကြဟုယုံကြည်.
သုံးအထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုခုံရုံးအတွင်းရေးမှူးဆောင်ရွက်ရန်ရန်အဘို့အသင့်လျော်သည့်အဖြစ်ထူးဆန်းသောအများစုအားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ကြ: စည်းရုံးရေးအလုပ် (93%), အဆိုပါပါတီများနှငျ့ဆကျသှယျ (81%) နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမိန့်များနှင့်ဆုများမဟုတ်သောထိရောက်သောအစိတ်အပိုင်းများမူကြမ်းပြင်ဆင်နေ (75%). စိတ်ဝင်စားစရာ, သာ 55% ဖြေဆိုသူခုံရုံးအတွင်းရေးမှူးဥပဒေရေးရာသုတေသနလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်းယုံကြည်သည်နှင့် 13% သူတို့ဆု၏ထိရောက်သောအစိတ်အပိုင်းများမူကြမ်းများကို ပြင်ဆင်. သင့်ကြောင်းယုံကြည်သည်. တွေ့ဆုံမေးမြန်းမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောတာဝန်များကိုလွှဲအပ်ရန်ကြောင့်မလျော်ကန်ကိုမြင်လျှင်.
ဖြေဆိုသူတစ်ဦးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအများစုခုံရုံးအတွင်းရေးမှူး၏အသုံးပြုမှုနှင့် function ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သင့်ကြောင်းစစ်တမ်းအတွက်အမြင်ထုတ်ဖော်ပြောဆို (68%) သူတို့ကိုအများစု (70%) အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားမှတဆငျ့ထိန်းညှိဖို့ပဲဟုယုံကြည်. တစ်ဦးကသိသိသာသာအများစု (72%) ခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားခုံရုံးအတွင်းရေးမှူး၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်နှင့်မကြာခဏအဖွဲ့အစည်းမှအတွင်းရေးမှူးရဲ့ connection ကိုခုံသမာဓိလူကြီးတန်ရာ-related တာဝန်များကိုလွှဲအပ်ရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်ဆိုတာသေချာလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားသင့်ကြောင်းစဉ်းစား. လည်း, အချို့ခုံသမာဓိလူကြီး, Co-ခုံသမာဓိလူကြီးအဖြစ်ထိုင်လျက်ရသောအခါ, သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်တာဝန်များကိုဦးခုံသမာဓိရုံးအားဖြင့်ခုံရုံးအတွင်းရေးမှူးမှလွှဲအပ်ခဲ့ကြသည်အရာကိုသတိထားမိကြဘူးကြောင်းညည်းညူ. ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်ချမှတ်ဖြေဆိုသူအတွင်းရေးမှူးတစ်ခုံသမာဓိရုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် likes ဘယ်သူကိုလူတစ်ဦးနှင့်ယုံကြည်မှုရှိရမည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားမှတဆငျ့ထိုကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ခုံရုံးအတွင်းရေးမှူး၏ထိရောက်မှုကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်သည်, အဆိုပါခုံသမာဓိရုံးအတွင်းရေးမှူး choses လျှင်နှင့်ဤသာအာမခံနိုင်.
39% ဖြေဆိုသူလက်တွေ့တွင်တတိယပါတီရန်ပုံငွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြ, 12% အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး 27% အသုံးပြုမြင်ကြပြီ, စဉ်တွင် 15% အာမခံထုတ်ကုန်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြ, 3% အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး 12% အသုံးပြုမြင်ကြပြီ. ထက်ဝက်ထက်တစ်ဦးကနည်းနည်းလျော့နည်း (46%) ဖြေဆိုသူနေတုန်းတတိယပါတီဒကာတစ်ဦးကြားနေအမြင်ရှိ 28% သူတို့ထဲကတစ်ဦးအပြုသဘောအမြင်ရှိ, နှင့်အလေ့အကျင့်အတွက်တတိယပါတီတွေအကြောင်းကိုအသုံးပြုကြသူဖြေဆိုသူ၏သေးငယ်တဲ့အများစုနေတဲ့အပြုသဘောအမြင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြ. တကယ်ပါပဲ, အပြုသဘောအမြင်ကျွမ်းတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့ကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်.
အများစုမှာဖြေဆိုသူ (71%) ထိုဒေသတွင်ထိန်းညှိဖို့ဆန္ဒညွှန်ပြ, မသက်ဆိုင်သူတို့တစ်တွေအပြုသဘောဆောင်ခဲ့ရှိမရှိ၏, တတိယပါတီရန်ပုံငွေ၏အနုတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်ကြားနေအမြင်, နှင့်အနိုင်နိုင်ထက်ဝက် (49%) အဲဒါကိုစည်းမျဉ်းလိုအပ်နေသည်ဟုယုံကြည်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသောဖြေဆိုသူ. 58% ဖြေဆိုသူကထိန်းညှိဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် IBA လမ်းညွှန်ချက်များအဖြစ်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အမှတဆင့်သောအမြင်လည်းရှိ၏ 29% လွတ်လပ်သောခန္ဓာကိုယ်ကငျြ့နေတဲ့ကုဒ်မှတဆင့်စုပေါင်း Self-စည်းမျဉ်းများအတွက် preference ကိုညွှန်ပြ.
လုပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကြောင့်စည်းမျဉ်းအဓိကအားဖြင့်ထုတ်ဖော်အပေါ်ထက်တစ်ဦးသည်ပြဋ္ဌာန်း၏ဖန်တီးမှုကိုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်ခဲ့, ထိရောက်သောစစ်အစိုးရကပိုမိုပျော့အပေါ်အလားအလာကိစ္စရပ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ခုံရုံးကို enable မယ်လို့အဖြစ်, အမှုကိစ္စတွင်အားဖြင့်အခြေခံ. ဒါကြောင့်တတိယပါတီရန်ပုံငွေအချို့ကိုရှုထောင့်ထုတ်ဖော်ရန်မဖြစ်မနေဖြစ်သင့်, 76% ဖြေဆိုသူ၎င်း၏အသုံးပြုမှုထုတ်ဖော်ထောက်ခံ 63% အဆိုပါငွေကြေးထောက်ပံ့၏ဝိသေသလက္ခဏာ. ရရှိလာတဲ့င့်လင်းမြင်သာအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများစစ်ဆေးသည်နှင့်ပါတီများ၏ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားအဖြစ်အခြေအနေတွင်နှင့်အတူခုံရုံးပေးကူညီဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟု. စိတ်ဝင်စားစရာ, 29% တတိယပါတီရန်ပုံငွေအစီအမံသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုထောက်ပံ့အတိုင်းအတာထုတ်ဖေါ်နိုင်ရန်အတွက်ထုတ်ဖော်သင့်ပါတယ်အပြည့်အဝအသုံးအနှုန်းများတစ်ပါတီနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အစီအစဉ်၏စည်းကမ်းချက်များ၏ရလဒ်အဖြစ်ရှိစေခြင်းငှါအခိုင်အမာ.
ပေမဲ့ 70% ဖြေဆိုသူတစ်ဦးလုံလောက်သောငွေပမာဏသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိလက်ရှိရှိကွောငျးမြင်ကွင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆို, ထိုကဲ့သို့သောခုံရုံးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်အချို့သောဒေသများ, တတိယပါတီရန်ပုံငွေနှင့်ခုံသမာဓိလူကြီးများ၏အပြုအမူစည်းမျဉ်းလိုအပ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ, သာပါတီကိုယ်စားလှယ်များများ၏အပြုအမူကိုနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိအတွက်အပိုဆောင်းစည်းမျဉ်းလိုအပ်နေအဖြစ်ရှုမြင်မခံခဲ့ရ.
စစ်တမ်း View: https://www.international-arbitration-attorney.com/2015-international-arbitration-survey/2015-international-arbitration-survey-2/
လန်ဒန်ဘုရင်မမာရိသည်တက္ကသိုလ်သို့သွားရောက် (အဖြူရောင်နှင့်အတူစစ်တမ်း၏စာရေးဆရာ & အမှု): https://arbitration.qmul.ac.uk/research/2015/